Tapa-kevitra ny Hanompo An’i Jehovah Aho | Diary 2014
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Ossète Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Zoloa
TANTARANY Mpitsoa-ponenana nanampy tamin’ny fanorenana Efitrano Fanjakana dimy.
NIBODO an’i Koindu, tanàna nisy anay, ny miaramila mpikomy tamin’ny 1991, ka nandositra izaho sy Satta vadiko. Nipetraka tamin’ny toby samihafa izahay nandritra ny valo taona. Maro ny olana natrehinay, anisan’izany ny aretina sy ny tsy fahampian-tsakafo. Ratsy fitondran-tena koa ny olona teny akaikinay.
Nangataka tany hanorenana efitrano izahay, tany amin’ny toby tsirairay nisy anay. Neken’ny manam-pahefana ny fangatahanay indraindray. Na tsy nekena aza ilay izy, dia nahita toerana nivoriana foana izahay. Tapa-kevitra ny hanompo an’i Jehovah mantsy izahay. Efitrano Fanjakana efatra no voaorinay, rehefa nandeha ny fotoana.
Tsy afaka nody izahay rehefa tapitra ny ady. Lasa tany ngazana mantsy i Koindu, taorian’ny ady naharitra an-taonany maro. Nafindra tany amin’ny toby hafa tany akaikin’i Bo indray izahay. Nanome vola anay ny biraon’ny sampana, ka afaka nanorina efitrano fanindiminy izahay.